Ampio andalan-tsoratra marika famantarana ao amin'ny Microsoft Office
Ampio sonia elektronika ao amin'ny Microsoft Office
Ity ID nomerika ity dia afaka manampy ny poloney sy ny filaminana amin'ny taratasinao
Azonao ampiana andalan-tsipika ahafahana mampiditra sonia nomerika hita maso na tsy hita maso any amin'ny dokam-barotra Microsoft Office . Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa maika kokoa.
Ankoatr'io fahamendrehana io, ny sonia taratasy dia afaka manome fiadanan-tsaina, manampy anao hampiana fiarovan-tena sy fiarovana matihanina amin'ny rakitra Word , Excel ary PowerPoint .
Nahoana ianao no mampiasa sonia ao amin'ny dokam-barotra Microsoft Office?
Fa tena zava-dehibe ve izany? Araka ny tranonkala mpanampy an'i Microsoft, manolotra mari-pamantarana ireo famantarana ireo, ka azo antoka fa:
Ny sonia nomerika dia manan-kery.
Ny mari-pamantarana mifandray amin'ny sonia nomerika dia misy (tsy vita).
Ny olona manao sonia na fikambanana, fantatra amin'ny hoe mpitory, dia azo itokisana.
Ny taratasy fanamarinana mifandraika amin'ny sonia nomerika dia omena amin'ny tompon'andraikitry ny sonia amin'ny alàlan'ny manam-pahefana manam-pahefana manam-pahefana (CA).
Amin'izany fomba izany, ny sonia niomerika amin'ny antontan-kevitra dia manampy amin'ny fitazonana ny fahamendrehan'ny antontan-taratasinao, na ho an'ny tenanao sy ireo izay mizara ny antontan-taratasy. Noho izany, raha toa ka tsy mila manasonia ny rakitra rehetra napetraka ao amin'ny Microsoft Office ianao, dia afaka mandray soa amin'ny fampidirana sonia amin'ny antontan-taratasy sasany.
Here & # 39; s How
Tsindrio izay tianao hapetraka ny mari-pahaizana ary tsindrio ny Fandefasana > Andalana Fahatakarana (vondrona Teknika) .
Ireo fanontam-pirinty dia hitondra anao amin'ny alàlan'ny fanendrena sonia nomerika. Ny sonia nomerika dia sehatra fiarovana. Eo ambanin'io fitaovan'ny menio io ihany, ho hitanao ny safidinao hanampiana ireo sora-tanana momba ny Signature, izay mety hanapa-kevitra anao fa liana.
Ilainao ny mameno ny antsipiriany, ao amin'ny boaty fanoratana fanoratana. Rehefa manao izany ianao dia hameno ny fampahalalana ho an'ilay olona izay hanao sonia ilay rakitra, izay mety na tsy mety aminao. Hahita saha ho an'ny anaran'ny antoko, ny lohateniny ary ny fampahalalana amin'ny fifandraisana ianao.
Raha ny mahazatra dia tsara ny mampiseho ny datin'ny sonia eo akaikin'ny tsipika famantarana . Azonao atao ny mamadika an'io endri-javatra io na tsia amin'ny fampiasana ny boaty.
Koa satria tsy mety aminao ny mpanasonia, mety ho tsara hevitra ihany koa ny handefa torolàlana momba ny sonia. Hahita saha ho an'ny teny maoderina koa ianao. Tsy vitan'ny hoe, fa azonao atao ny mamela ireo saka mpandefa tsikera miaraka amin'ny sonia. Izany dia mety ho fomba tsara indrindra hisorohana sy hiverimberina tsy misy ilàna azy satria ny sonian'ny olona dia afaka mamaritra ny fepetra manokana manonoana ny sonian'izy ireo. Izany dia atao amin'ny fanamarinana ny boaty mety.
Mariho fa afaka mampiditra marika marika maromaro ho an'ny antontan-taratasy iray ianao, ary raha ny marina dia mahazatra ny manao izany satria maro ny rakitra dia fiaraha-miasa. Avereno averina fotsiny ireo dingana etsy ambony ho an'ny laharan-tsoratra fanampiny.
Ataovy an-tsaina fa azonao atao ny mampiditra sonia tsy mahita maso na tsy hita maso. Ny dingana etsy ambony dia mamaritra ny fomba ahafahanao mampiditra ny endrika hita ao amin'ny iray amin'ireo antontan-taratasinao. Raha te hanoratra sonia tsy hita maso ianao, izay manome ny olona mahazo antoka ny fiavian'ny rakitra, dia fidio ny bokotra Office - Prepare - Hanampy ny sonia nomerika .
Mila manasonia andian-dahatsoratra iray hafa nomena ao amin'ny rakitra Microsoft Office ianao? Ataovy izany amin'ny alalan'ny dika mitovy tsipika ny tsipika famantarana. Avy eo dia afaka manonona fepetra vitsivitsy ianao, toy ny fampiasana ny antontan-taratasin'ny sonianao raha toa ka efa voavonjy ianao ary misy; manome sonia marika famantarana na sora-tanana amin'ny fampiasana ny rantsantanana na ny stylus; na tafiditra amin'ny dika printy ny sonianao, ho an'ireo izay manana sonia tsy manara-dalàna!
Esory ny sonia amin'ny fisafidianana ny Office Button - Miomana - Hizaha ny Signature s. Avy eo, afaka manondro ianao hoe te hanala ny iray, na maromaro, na sonia rehetra.
Ny tsara indrindra Add-Ins sy Apps izay manitatra Microsoft OneNote
Kalandrie sy fitaovana tsara indrindra ho an'ny New Year
Microsoft Office Mobile App ho an'ny Apple Devices
Asio tahirin-kevitra amin'ny Google Docs
Ahoana no fomba fanomanana sy mamorona WordPerfect Templates
Fampidirana ireo mpizara amin'ny Teny
Ahoana no hamoronana sy hampiasa Word Templates
Hashtags Twitter ho an'ny Software, Asa ary Fahombiazana
Ahoana no fomba fametrahana ny safidinao amin'ny Word 2016 amin'ny PC?
Civilization IV PC Game Cheat Codes
Ny fitoeran'ny Best Home Theater Kitsaka tsara indrindra hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 500
Inona no atao hoe MDA?
Ahoana ny fomba fampiasana App vaovao an-telefaona vaovao an'i Apple
Ahoana no hanaisotra ny Blocker Pop-Up ao amin'ny Firefox
Tena mavitrika ny tranonkala efa navoaka foana
Ahoana ny fampiasana ny fitsipiky ny ray aman-drenin'i Netflix
Superuper: Tom's Mac Software Pick
Fantaro ny fahasamihafana eo amin'ny vatana sy ny lohateniny
Mampiasà Slingbox ho an'ny adiresy Access amin'ny fidinao
Inona ny rakitra VCF?
Ny fomba hahazoana vokatra bebe kokoa amin'ny iPad amin'ny asanao
Fomba hananganana ny sarin'i Gantt ao amin'ny Google Sheets
Ahoana ny fomba ampiasana Facebook Timeline
Samsung BD-H5900 Blu-ray Disc Player Review
Fomba fijery ny antony mahatonga ny shorts elektrika amin'ny PC
Ny fanomezana 8 Best Tech hividianana lehilahy ho 2018
Inona no atao hoe JSX File?
Hanatsara ny fandraisam-peo Radio